फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - रोटीगोटी
रोटीगोटी विमल निभा
नेकपा माओवादी (केन्द्र) का सदावहार अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनासाथ मधेसी मोर्चाले टुँडिखेलको खुला मञ्चमा लामो समयदेखि गर्दै आएको भोक हडताल तोडेको छ । अब उप्रान्त यसका भूतपूर्व अनशनी नेताहरूले पहिलेजस्तै कपाकप रोटी खान थालेका छन् । यसको स्वाभाविक परिणाममा कमरेड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूबीच रोटीको सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।
यो रोटीको सम्बन्ध पटक्कै यस्तो(उस्तो खालको हुने गर्दैन । किनभने सवाल पेटको हो । यसमा एक अदत् विशेषण थपेर ‘पापी पेट’ पनि भन्ने गरिएको छ । म भने यो भन्नुसँग कदापि सहमत छैन । यसले विचरा पुण्यात्माहरूका पेटलाई अन्याय हुन जान्छ । र हामीकहाँका तमाम पेटुहरूले स्वयम्लाई कुनै पुण्यात्माभन्दा अलिकति पनि कम ठान्ने गर्दैनन् । यसमा त्यस्तो गलत पनि के छ र ?
यहाँ अहिलेसम्मन ‘जसको ठूलो पेट, त्यही सबभन्दा ठूलो पुण्यात्मा’ भनी ठानिएकै छ । यही हामीकहाँ मज्जैले चल्दै आएको पेटको सिद्धान्त हो । यसलाई अर्को शब्दमा पेटवाद पनि भन्न सकिन्छ । हो, यस्तै पेटवादी पेटुहरूले सहजै धारण गर्ने रोटीले ‘पेट र रोटी’को सम्बन्ध सशक्त हुने गरेको हो ।
याद रहोस्, यो विशेष रोटी हो । तसर्थ मलाई के लागेको थियो भने यही विशेष रोटीलाई एकमात्र साक्षी राखेर हालै अनशनमुक्त भएका मधेसी मोर्चाका नेताहरू सरासरी कमरेड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वर्तमान सरकारमा खुसी(खुसी सामेल हुन आउनेछन् । तर अचम्मैले यस्तो केही पनि भएन त र?
‘तपाईहरू किन सामेल हुन नआउनु भएको नेताजी ?’ मैले एक जिल्लाबासी मोर्चानेतासँग प्वाक्कै सोधेँ ।
‘कहाँ सामेल हुनु ?’ सायद मेरो प्रश्न नबुझेर उनको माथा खुम्चियो ।
‘कमरेड प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा ।’
‘हामी यो सरकारमा किन सामेल हुन आउने ?’ उनको माथा अझ खुम्चियो ।
‘तपाईहरूमा सम्बन्ध स्थापित भएको होइन र ?’ मैले उनको एक आँखामा आफ्नो अर्को आँखा गडाएँ ।
‘कस्तो सम्बन्ध ?’
‘अरू कस्तो सम्बन्ध ?’ म थोरै हाँसेँ, ‘रोटीको सम्बन्ध नि !’
‘तपाई मसँग यस्तो वाहियात मजाक नगर्नोस् ।’ उनको अनुहारमा एक्कासी देखापरेको क्रोध उम्लिएर झन्डै तल पोखिएकोले हाम्रो मौजुदा वातचितले अघि बढ्ने अवसर पाएन ।
होइन, यस्तो प्रगाढ रोटीको सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि मधेसी मोर्चाका अस्तिनदेखि लगातार रोटी खाइरहेका नेताहरू कमरेड पुष्पकमल दाहालको वर्तमान सरकारमा सामेल हुन किन नआएका होलान् ? यसको गाँठी कारण पनि यही रोटी नै हो । वास्तवमा दुवै पक्षबीच रोटीको मामलामा वातचित नमिलेर यस्तो भएको हो । नेकपा माओवादी (केन्द्र) का मेरा एक परिचित सरकारी नेता कमरेडले मलाई कुराकानीको सिलसिलामा के बताए भने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले रोटीको ठूलो टुक्राको अटुट माग गरिरहेका छन् रे !
अब कमरेड प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो मधेसी मोर्चाको मागमा स्वीकृति प्रदान गर्नु त्यति सहज छैन । यसको प्राविधिक कारण पनि रहेको छ । वस्तुतस् रोटीको ठूलो टुक्रा त वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस पार्टीको भागमा परेको छ । अब यसलाई खोसेर मधेसी मोर्चालाई कसरी दिन सकिन्छ ? याने रोटी एक र यसलाई लुछ्ने शैलीमा उदरस्थ गर्नेहरू अनेक । यो सत्ताको जटिल अंकगणितको सही हल खोज्न नसकेर कमरेड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बृहत अलमलमा परेका छन् । तर मधेसी मोर्चाका रोटीप्रेमी नेताहरूलाई यससँग के सरोकार हुनसक्छ ?
यिनीहरूलाई त रोटीको एक ठूलो टुक्रा नभई भएको छैन । यही रोटीसम्बन्धी आवश्यक, अनावश्यक हानथापको फलस्वरूप प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताहरूमा सम्बन्ध त्यति सबल एवं सुदृढ हुन नसकेको हो ।
यस सम्बन्धमा थप चिन्तन(मननपश्चात म के ठोस निष्कर्षमा पुगेको छु भने प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेसी मोर्चाका यी नेताहरूबीच रोटीले नमिलेको विवाद गोटीले अवश्यमेव मिल्नेछ । अब नेपालको मौजुदा राजनीतिक खेलमा ‘को कसको गोटी’ भन्ने विषय त्यति रहस्यमय रहेन ।
त्यसकारण म विस्तारमा कुनै व्याख्या(स्याख्या गर्न्तिर नलागेर केचाहिँ निर्धक्कसँग भन्छु भने यी निरीह गोटीहरूले नमिली सुखै छैन । यिनीहरूका आफ्नो कुनै स्वतन्त्र चाल हुँदैन । अर्थात् आगे अदृश्य गोटी चालकको कृपा । र यो महान कृपा रहिरहेसम्म ‘रोटीगोटी’का हाम्रा राष्ट्रिय खेलाडीहरूका भविष्य उज्ज्वल नै रहेको छ ।
कान्तिपुर, भाद्र ४, २०७३